Banyere Anyị - henzhen Locksmithobd Technology Co., Ltd.
XK Series Wired Remote (Na-enweghị transpoder)
XN Series Ikuku Remote (Na transponder)
XS Series Smartkey Ime
XE Series Super Ime
Car Key oghere
Ebe dịpụrụ adịpụ
Car mkpọchi Ngwa
Car Key Mmemme
Ndị ọzọ – Echere m na ị ga-achọ
Ckslọ ọrụ Locksmithobd bụ ụlọ ọrụ shenzhen, edebanyere aha na China na adrees dị na District Shenzhen Longhua, Long Hua Road, Tianhui Building, C-512. Anyị bụ ụlọ ọrụ China nke nwere ọpụrụiche n'iji igodo nke igodo ụgbọ ala yana akụrụngwa mkpuchi. Anyị bụ ndị ọrụ nke LISHI, GOSO, HONEST, KLOM.HUK. Anyị bụ ndị na ekesa ụwa ma ezi na Aftermarket ụgbọala remote na transponder igodo.
Anyị anọwo na-enye ndị igodo ụgbọ ala maka azụmaahịa moto na ndị mkpọchi maka afọ 5 gara aga ma na ime nke a, anyị wulitere mmekọrịta dị mma na ndị nrụpụta, ndị na-ere ahịa na ndị ọzọ na-ekesa ya ka ị nweta ọnụahịa kacha mma na igodo gị. ụlọ ọrụ mmepụta ihe na Zhejiang. A na-anabatakwa ndị ahịa ịtụ ahịa na weebụsaịtị anyị mana biko chọọ ndụmọdụ ọkachamara ma ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ ọ bụla maka ndakọrịta akụkụ.
Ndebanye aha:Ọ bụghị ihe achọrọ iji debanye na weebụsaịtị anyị mana ndị ahịa azụmaahịa kwesịrị ịdebanye aha iji rite uru na ọnụahịa anyị. Ndị ahịa azụmaahịa nwere ike ịdebanye aha ebe a - http://www.locksmithobd.com/my-account/
Mentkwụ ụgwọ:Anyị na-anabata ịkwụ ụgwọ na GBP, EUR na USD. Anyị na-anabata Visa, Matercard na ọdịda anyanwụ n'otu, nnyefe ụlọ akụ T / T. Anyị na-anakwere ịkwụ ụgwọ site na nnyefe ụlọ akụ mba ofesi ma ọ bụ PayPal (ụgwọ nwere ike ịdị). echefula kwụọ ụgwọ papal biko.
Nnyefe:Anyị na-enye ọkọlọtọ ma gosipụta nhọrọ nnyefe n'ụwa niile. Anyị na-eji ụlọ ọrụ ozi ndị na-esonụ iji wepụta iwu gị: China Post, DHL, TNT na FedEx. Ngwaahịa ga-erute ọtụtụ mba n'ime ụbọchị asaa - iri na anọ.
Laghachi:Ndị ahịa nwere ike ịlaghachi ngwaahịa ọhụrụ na anaghị eji ya maka nkwụghachi (ewepu ihe pụrụ iche) n'ime ụbọchị 7. Anyị enweghị ike ịnakwere nloghachi na igodo ndị ebipụla na koodu ma ọ bụ bee na chassis number ka ngwaahịa ndị a mere ịtụ. Enwere ike weghachite ngwaahịa mejọrọ maka nkwụghachi mana anyị agaghị akwụghachite ngwaahịa ọ bụla nke anaghị arụ ọrụ n'ihi na ị mebiri ya.
Mpaghara Shenzhen LongHua, Long hua Road, Tianhui Building.C-512